Maalinta: Abriil 21, 2020
Wadahadalka Khadka Tecer-Karagöl-Kangal, Sigaliska, Tamarta iyo Fiber Optic Laying iyo Nidaamyada Gudbinta Tilmaanta Tilmaanta TenderDerka Hay'adda Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) 2019/469865 iyada oo qiimaha ugu dhow ee tirada TEC ay tahay Tecer-Karagöl-Kangal [More ...]
Waxaan sii wadnaa qeybta labaad ee maqaalkeena taxanaha ah “Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga iyo Helikobtarada Guud ee Ujeedada leh”. Waxaad guji kartaa halkan qeybta koowaad. Mashruuca Soosaarista Helikabtarka Guud ee Ujeedada wuxuu ka bilaabmayaa 80's Wasaaradda Difaaca Qaranka [More ...]
BTS waxay ka qaybgashaa Nancy Congress sida lagu casuumay CGT Railway Work Union Union
Ururka Shaqaalaha Shaqaalaha Tareenka (CGT Cheminots), oo xubin ka ah Xiriirka Caalamiga ah ee Shaqaalaha Gaadiidka oo ka hoos shaqeeya Isutagga Ganacsiga Guud ee Faransiiska (CGT), waxaa lagu qabtay Nancy, France intii u dhaxeysay 10-13 Maarso 2020. [More ...]
Tigidhada Diyaaradda Rakaabku Soo Laabto Waa Lahubo
Wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa sheegay inay qaadeen talaabooyinka lagama maarmaanka u ah yareynta waxyeelada cudurka New Type Coronovirus ee ganacsiga caalamiga ah. Tallaabooyinka la qaaday, waxay qaadataa masaafo aad u weyn dagaalka lagula jiro fayraska. [More ...]
Khadadka Basaska Looga Shaqeeyo Bandowga Magaalada Malatya Oo Go'aamiyay
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada Malatya iyo Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha Motaş AŞ. Khamiista, 23.04.2020 - 26.04.2020 Rakaabka saaran waajibaadka inay ka shaqeeyaan bandowga axada, Khadadka qaarkood ayaa gaar u ah shaqada Sabtida iyo Axadda [More ...]
Meteksan Defence waxay taabataa Qaybta khatarta ah ee gantaalada
Dhinaca warshadaha difaaca, Difaaca Meteksan, oo soo saaray isla markaana soo saaray nidaamyada farsamada sare ee aaladaha gudaha, qaran ahaan iyo asal ahaan, ayaa hadda ah mid ka mid ah khataraha ugu muhiimsan ee deegaanka hawlgalka, Global Positioning. [More ...]
Kordhinta Tirada Isticmaalayaasha Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir Soo Kordhay
Kadib bandoow lagu soo rogay sabtiga sababa cudurka faafa ee 'corona virus', kororka tirada dadka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha Izmir ayaa isniintii (20-kii Abriil) kor u qaaday welwelka. Duqa Magaalada Tunç Soyer, gaar ahaan ardayga, [More ...]
Ogeysiis ayaa waxaa daabacay Dowlada Beykoz. Ogeysiiska la shaaciyey, 50 sarkaal oo booliis ah ayaa laga shaqaaleysiin doonaa ragga iyo dumarka murashaxiinta ah. Waxaa hoos imanaya sharciga shaqaalaha rayidka ah ee lambarka 657 ee degmada Beykoz [More ...]
amarka xarunta hawlgallada ee Turkey si ay isugu dayaan in ay sida dil aan xuduud lahayn masaafada iyo hagaajiyo hawlaha hawl si on April 17, 2020 Air Force oo Navy la qaybgalka xubno "Badda Open [More ...]
Degmada Elazig waxay sii wadaa dadaalkeeda ku aaddan adeegga gaadiid ee badbaadada iyadoo la qaadayo tillaabooyin lagu qaadayo muwaadiniinta adeegsada gaadiidka dadweynaha. Dawlada Hoose ee Elazig waxay sii wadaysaa talaabooyinkeeda si ay uga difaacdo caafimaadka muwaadiniinta ka hortagga faafitaanka fayraska Corona. [More ...]
Baarkinka Dayax-gacmeedka Dayaxa waxaa lagu beeray Altinordu
Iyagoo doonaya inay ka baxaan magaalo cagaaran oo nolol fiican u leh jiilalka dambe, Degmada Ordu ee Magaalo Weyn waxay sii wadaa inay abaabusho xaalufinta dhirta iyo cagaarka gobolka oo dhan. Macnaha guud, kooxuhu sidoo kale waxay joogaan joogitaanka Ayışığı Parking Lot ee Degmada Altınordu. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay ku soo gabagabowday Buuga iibka ah ee Buffet iyo Shaqada Dhisida Dhulka ee Boztepe, oo kamid ah meelaha soo jiidashada magaalada. Wadada loo xiray gaadiidku inay muwaadiniinta siiso maraakiib aan la tirin karin [More ...]
Khadadka Lagu Shaqeeyo Bandowga 4-Maalmood ee Antalya Go'aamiyay
Dowladda hoose ee Antalya waxay qorsheyneysaa inay gaadiid dadweyne siiso shaqaalaha daryeelka caafimaadka, dadweynaha iyo shaqaalaha kale, kuwaas oo ku qasban inay ka shaqeeyaan xaddiga bandowga 22-maalmood, oo bilaaban doona habeenka Abriil 4. 4 maalmood [More ...]
Bartilmaameedka Bart 2020 Bin kiiloomitir 100 ee Samsun
In kasta oo 'cudurku' ka jiro Samsun, Dawladda Hoose ee Magaalada, oo sii wadata howlaheedii dhismaha wadooyinka, ayaa wadada 'High Avdan - Demircili Group' ka dhigtay 'Wadada laamiga ah'. Madaxweyne Mustafa Demir ayaa yidhi, "Magaalada Samsun, 2020 kun oo kiiloomitir ayaa la samayn doonaa sannadka 100". [More ...]
Diyaarinno ayaa laga sameeyaa Isgoysyada si loo Dayactiro Gaadiidka ee Konya
In kasta oo dowladda hoose ee Konya ay sii wadayso howlihii wasakhda si isdaba joog ah baaxadda tallaabooyinka coronavirus, waxay sidoo kale fulisaa qabanqaabooyin isgoysyada qaar si loo yareeyo isu socodka magaalada. Duqa Magaaladda Konya ee Uğur İbrahim Altay, wuxuu kordhinayaa habsami u socodka taraafikada [More ...]
Qiimaha House kordhiyo ee Istanbul iyo Turkey
Xafiiska Tirakoobka Magaalada Istambul ee Magaalada Istaanbuul ee Istanbul ayaa daabacay Abriil 2020 Suuqa Guryaha Magaalada Istanbul, halkaas oo lagu qiimeeyo suuqa guryaha ee Istanbul. Qiimaha guryaha Labada kacay Istanbul ee dalka Turkiga, wadarta guud ee u iibin jireen inay ajnabiga [More ...]
Midnimo ayaa ku soo kordha Izmir inta uu fidayo Coronavirus uu sii socdo
In kasta oo cudurka coronavirus uu sii socday, Duqa Magaalada Magaalada Izmir Caasimadda Tunç Soyer wuxuu ku celceliyey baaqii ahaa in la taageero ololaha We Are. Tunç Soyer "Markii aan sii koreyno midnimadaan, sida ugu dhakhsaha badan ee aan u bogsano, ayaan u xoog badanahay" [More ...]
Xaaladaha Turkey Coronavirus ee Qiimayaasha ciidmada Toddobaad World; In kasta oo tirada dhimashada cudurka 'corona virus' ee adduunka ay ka badan tahay 170 kun, cudurka faafa ee corona wuxuu sii wadaa inuu ku faafo xawaare. Wadarta tirada kiisaska oo ah cabbir caalami ah 2 [More ...]
Qorshaysan Ururka Ganacsiga dalka Turkiga ayaa waxaa dib loo dhigay ama ka dib 1 July
Qorshaysan Ururka Ganacsiga dalka Turkiga ayaa waxaa dib loo dhigay ama ka dib 1 July, Wasaaradda Ganacsiga, tallaabooyin virus Corona gudahood baaxadda dhan bandhigyo qaranka iyo kuwa caalamiga ah la qorsheeyay in lagu qaban doono dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ay dib u dhigay ilaa iyo ka dib markii 1 July. Wasaaradda Ganacsiga 20.04.2020 [More ...]
Iyaga oo la kaashanaya Aaladda Teknolojiyada ELAA iyo Xarunta Cilmi-baarista ee Isku-dhafan ee Sabancı iyo Xarunta Codsiga, waxay horumarinayaan aalad la qaadi karo oo farsameysan oo neefsashada loogu talagalay bukaannada qaba cudurka COVID-19. Joogitaanka bukaanka oo leh qalabka dabaysha la qaadan karo [More ...]
Cunnooyinka fudud ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee la iibsado bandowga labaad
Iyada oo bandowga ugu horreeyay lagu dhawaaqay 10:22.00 fiidkii Abriil 1.000, rooti, ​​biyo iyo caano ayaa ah badeecadaha aadka loo iibsaday. Sida laga soo xigtay xogta Trendbox ee ka socota in ka badan 17 goobood oo ku yaal Istanbul, XNUMX-ka Abriil [More ...]
Coronavirus Shil Shaqo ama Cudurka Shaqada?
Cudurka loo yaqaan corona dartiis, dad badan ayaa gurigoodii uga soo guuray iyagoo u dhaqaaqaya qaab shaqo. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira kooxo xirfad shaqo oo ka shaqeynaya gudaha iyo la xiriirista dadka shaqooyinkooda. Markay dadkani cudurka qaadaan, [More ...]
Shaqaalaha Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa lagu Dilay Weerar ka dhacay Myanmar
Shaqaalaha Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa ku dhawaaqay in darawal lagu dilay weerar ka dhacay Myanmar. Darawalka bukaanada Corona ee sita xiniinyaha baaritaanka iyo gaarigiisa ayaa lagu joojiyay gobolka Rakhine ee Myanmar, kadib markii uu ku dhaawacmay weerarka, wuxuu ku noolaa isbitaalkii halkaas laga saaray. [More ...]
Iyaga oo talaabo weyn u qaadanaya la dagaallanka cudurka 'coronavirus', Garanti BBVA waxay ololeysaa Ololaha Qaranka ee Midnimada iyo 30 oo kaydiyayaal ah oo qiimahoodu qiyaastii yahay 200 milyan oo TL ah. Garanti BBVA wuxuu xubin ka yahay kooxda BBVA [More ...]
Go'aannada Madaxweynaha marka laga soo tago Go'aanka Diiwaangelinta Soo-dejinta ayaa lagu soo daabacay Gazette Rasmiga ah lana dhaqan geliyey. Iyada oo la raacayo Go'aanka Madaxweynaha ee lambarkiisu yahay 21.04.2020 ee ku taariikhaysan 31106, kaas oo lagu faafiyey Rasmiga rasmiga ah ee Gazette Number 20.04.2020 ee ku taariikhaysan 2430; marka lagu daro alaabada warshadaha [More ...]